शुभकामनामै सीमित नबनोस् नया“ वर्ष २०७२ | चितवन पोष्ट दैनिक
शुभकामनामै सीमित नबनोस् नया“ वर्ष २०७२
२०७२ बैशाख १, मंगलवार ०२:२८ गते
समय परिवर्तनशील छ । हरेक क्षण, समय निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ । सेकेन्ड, मिनेट, घन्टा, दिन, हप्ता, महिना गर्दा वर्ष बित्छ । हरेक महिना हाम्रो घर÷कार्यालयको भित्तामा राखिएको क्यालेन्डरका पानाहरु पल्टाइने गरिन्छ र वर्षदिनमा ती क्यालेन्डर अर्थात् भित्ते पात्रोलाई परिवर्तन गरी नया“ पात्रोलाई स्थान दिन्छौँ । यसै सिलसिला अर्थात् समयको जीवन–चक्रअन्तर्गत विसं २०७१ सालले हामीलाई छाडेर बिदा भएको छ । २०७१ सालको बिदाइस“गै हामीमाझ २०७२ को मिर्मिरे उज्यालोले हामी सबैमाझ नया“ जोश, नया“ उमंग, उत्साह र आशाका किरणहरु लिएर उपस्थित भएको छ ।
संसारका प्रत्येक मुलुकमा नया“ वर्È हर्Èोल्लास र उमंगका साथ मनाइन्छ । विकासको रफ्तारस“गै देश र जनताले हरेक सालमा सफलताको एक नया“ उचाइबाट नया“ वर्È मनाउ“छन् । हरेक Ôेत्रबाट नया“नया“ सफलताका वार्Èिक प्रतिवेदनका तथ्यांकहरु बाहिर ल्याएर इतिहास रच्दै नया“ योजनाका साथ राज्यले नया“ वर्Èलाई मिसनका रुपमा मनाउ“छ । जनताको सेवामा सरकारले अभिभावकझैँ भूमिका निभाएको हुन्छ, त्यसैले त उनीहरु राज्यलाई सम्मान गर्छन, माया गर्छन् अनि आकाश झिलमिल पारेर पटाका पट्काएरै नया“ वर्È मनाउ“छन् । हामी नेपालीले आफ्नो नया“ साल कुन खुशीयालीमा मनाउने हो भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ ।
खाडीको घाममा मृत्युस“ग जुधिरहेको एक नेपालीे, भारतको गल्लीमा डन्डा बजार्दै र जुठो भा“डा माझ्दै गरेका नेपाली, एक गा“स खानाका लागि बगरमा बालुवा बोक्न जानेहरु, बिहान क्याम्पस गएर दिनभर लेबरी गर्नेहरु, आफ्नै घरपरिवार, आफन्त तथा छिमेकी समेतबाट बलात्कृत हुने चेलीहरु, दाइजोको निहु“मा आगोले पोलिने, मानसिक यातना खेप्ने चेलीहरु, तमाम सुकुमबासी, हलिया, भरिया, किसान, दिनभरि मजदुरी गरेर परिवार पाल्नेहरु, औÈधिको अभावमा मृत्युलाई कुरेर बसेका नेपालीहरुले कुन खुशीयालीमा नया“ वर्È मनाउ“छन् ?
हरेक नया“ वर्Èले थप भार, दुःख र पीडा बोकेर आएको हुन्छ, अनि कसरी मनाउने नया“ वर्Èको खुशीयाली ? दुःखलाई भुलेर त मनाउन सकिएला, यदि राज्य अर्थात् मुलुकले बिस्तारै प्रगतिको पाइला चाल्दै छ भने । तर, हाम्रो मुलुक झन्झन् गहिरो खाडलमा धसिँदै छ, आर्थिक वृद्धिदर सयौँ गुणाले घट्दै छ, देशका कलकारखाना, संस्थानहरु, प्राधिकरणहरु चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, देशको आय स्रोत शून्य छ, जनताबाट कर उठाएर आफ्नो पोल्टो भर्दैछन् नेताहरु, सरकार र प्रतिपक्षको निरन्तरको खिचातानी, संविधान नबनाएर वर्षौंंवर्Èसम्म राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्दैछन् ।
कमिसनको चक्करले बनेका कच्ची विकासका संरचनाहरु एक वर्Èमा भत्किएका छन्, विदेशीको इशाराले गर्दा देशको अस्तित्व नाजुक बन्दै छ, सिमाना लुटिएको छ, लुम्बिनी लुटिएको छ, विदेशीहरुले नेपालीलाई पत्याउन छोडे, देशका मन्त्री÷नेताहरु भ्रष्टाचार गर्दै विदेशमा सम्पत्ति थुपार्दै छन्, गुन्डागर्दीले राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ, दण्डहीनता, अपराधीहरुलाई संरÔण तर गरिब जनतालाई हुँदै नभएको कानुन लगाएर जेल चलान, लुटपाट, मानव बेचबिखन, फिरौती, कोही न्यायका लागि महिनौँ आमरण अनशनमा बसेर मृत्यु वरण गर्छ भने कोही भ्रष्टाचार निवारण र सर्वसुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था मिलाउन आमरण अनशनमा बस्नु परेको अवस्था….उफ् !
खै, कसरी मनाउने नया“ वर्È ? यो लोकतन्त्रभन्दा त हिजोको राजाको शासन हजारौँ गुणा राम्रो थियो । कम्तीमा काम गरेर सुखस“ग खान पाएका त थिए, नेपालीले । विकासका संरचनाहरु हजारौँ गुणा बलियो र गुणस्तरीय थिए, जुन अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै छन् । आप्mनो माग पूरा गराउन अर्काको सम्पत्ति जलाउने, देश नै ठप्प पार्ने, अराजनीतिक गतिविधि र चलखेल, दण्डहीनता, अनुशासनहीनता, वर्तमानजस्तो भ्रष्टाचार, मनपरी राजाको शासनकालमा थिएन । तर खै, आजकल बनाएको दुई दिनमै भत्किएका छन् संरचनाहरु, अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण र सोझा निमुखाले जेल भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।
वर्तमान नेपाली समाजमा सत्य बोल्नेलाई पागलको संज्ञा दिन्छन् भने असत्य बोल्ने, ढा“ट्ने, छल्ने, देखावटी संसारलाई वाहवाही गर्छन् । सत्य कोही सुन्न चाह“दैनन् । जे–जस्तो अवस्था र दैनिकी भए पनि समयस“गै दिनहरु फेरिँदै वर्षदिन पनि बितेर हामीमाझ नया“ वर्ष २०७१ को आगमन भएको छ । यो नया“ वर्षमा सबैको केही न केही आकांक्षा, अभिलाषाहरु पक्कै पनि होलान् । २०७१ सालमा लाखौँ प्रयासका बाबजुद पूरा हुन नसकेका आशा, अभिलाषाहरु होलान् । कसैको नया“ जीवनको शुरूवात गर्ने चाहना होलान्, प्रेमीप्रेमिकाले एकापसमा जीवन बिताउने सपना देखेका होलान् । त्यस्तै कसैको जागिर खाने र कसैको देश सेवा गर्ने, यस्ता खाले अनेक चाहना र अभिलाषाहरु बोकेर वर्षैभरि अनेक प्रयासका बाबजुद पनि सफल परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैन होलान् ।
सबै प्रयासका बाबजुद पनि २०७१ सालमा सफल हुन नसकेका सबैको चाहना, सकारात्मक अभिलाषा, अर्काले देखाएको सपना, वाचाहरु २०७२ मा पूरा होऊन्, स्वदेशमै रोजगारी गरी देशको सेवा गर्ने लक्ष्य लिएकाहरु रोजगारीको अभावमा विदेशिन नपरोस् । यस नयाँ वर्षमा कुनै पनि चेलीले बलात्कारको शिकार हुन नपरोस्, सबैले न्याय पाऊन् । आफ्ना आमा, भाइ, बहिनीलगायतका परिवारको एक्लो आशाका किरणले मानसिक तनाव खप्न नसकी आत्महत्या गर्न
नपरोस् । कसैले पनि आफ्नो हु“दाखा“दाको परिवार, खुशी त्याग्न नपरोस् । जीवन जिउने आशामा बसेका कसैले पनि मानसिक तनावमा आफ्नो जीवनलाई नर्कसरह बनाउने दिन यो नया“ वर्षमा नआओस् । आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिकाको गल्तीको सजाय आफैँलाई दिई आफ्नो पेसा, व्यवसाय, जागिर, साथीस“गी, समाज र मुलुक नै त्याग गरी शारीरिक कष्ट भोग्न अर्काको देशमा जान
नपरोस् । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा, रहरका लागि कसैलाई पनि झूटो आश्वासन, सपना नदेखाइयोस् ।
नया“ वर्षले सबैको सकारात्मक अभिलाषहरु पूरा होस्, देशमा शान्ति र अमनचयन कायम होस् । सबैमा आपसी प्रेम, सद्भाव, भाइचारा कायम होस् भन्ने यस्ता प्रकारका चाहना, आकांक्षा, अभिलाषाहरु हु“दाहु“दै पनि २०७१ सालको गतिविधि हेर्दा कुनै देशले खासै प्रगति गर्न नसकेको अवस्थामा विभिन्न निराशाहरु उत्पन्न भएपछि भन्नै मन लाग्यो– “भो, अब म मनाउ“दिनँ नया“ वर्ष, जबसम्म नया“पनको अनुभूति हु“दैन ! यद्यपि, मैले नया“ वर्ष नमनाए पनि सबै नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीलगायत देशप्रति माया भएका नेपाल र नेपालीप्रति सद्भाव राख्ने सबैको सकारात्मक अभिलाषाहरु श्रीपशुपतिनाथले पूरा गरुन् । नया“ वर्ष २०७२ मा सबैको जय होस् !